Minbarka Mubarak - Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Friday 2018
Minbarka Mubarak waa erey kaas oo Muslimiinta oo dhan isticmaalaa adduunka oo dhan si ay u soo salaamayaan raacsan Muslim ay ku lixda maalmood ee toddobaadka yeedhay “Friday”.
Friday (minbarka Mubarak) waa maalin muhiim u ah diinta Islaamka iyo ku leeyahay amar gaar ah by Eebe (Ilaah). Waxaa jira laba sababood for this; Muslimiinta ku tukado salaada jimce ama minbarka salaadaha toddobaad kasta iyo labaad sida ay taariikhda Islaamka, waxaa jiray dhacdooyin badan oo muhiim ah ayaa ka dhacay maanta.
minbarka Mubarakah – maalin barakaysan Of ama minbarka
minbarka Mubarak macnaha
Waa maxay minbarka?
Waa maxay salaada Jummah?
Jum'ah: Ahmiyadda Of Friday iyo minbarka Salaadda
Ma Friday maalin quduus ah Muslimiinta?
Faa'iidooyinka maalinta Juma
Minbarka Mubarak laba qeexidda
muhiimada ay minbarka Mubarak
Sida laga soo xigtay cilmiga Nabiga (NNKH), Minbarka waa maalin la Barakeeyey. Si aad u tasbiixsada barakooyinka Juma, Muslimiinta salaama maalinta this.
Dalalka in Middles sidoo kale ay fasax todobaadle on Friday halkii Sunday si ay Muslimiinta u oofin karin salaada jimcaha ee masjidka iyo waqtigooda ku qaataan qoyska. yeeray maalin farxadeed ma noqon doonto khalad.
Maanta ayaa sida ay muhiim u gaar ah ee diinta Islaamka iyo taariikhda. Sidaas, garanaya oo ku saabsan maantadan la joogo waxaa muhiim ah, taasi waa sababta aynu keeno this article faahfaahsan oo aad waayo, bal yaa kaa caawin doona inaad si ay u fahmaan waxa run ah taasoo la micno ah ee minbarka Mubarak, Barakada iyo waxa falaa Eebe iyo Nabiga (NNKH) ayaa sheegay in ku saabsan maalinta muhiimka ah.
Minbarka waa erey Carabi ah taas oo macnaheedu yahay “Friday”. Inkasta oo minbarka waa eray af Carabi laakiin Muslimiinta ku nool dunida oo dhan lagu isticmaalayaa ereyga isku Jimcaha, Wax macno ah ma in luqadda ay soo socda.
Tani waa sababta oo ah qofka Friday, kaas oo magacyadoodu waa “minbarka Salaada”. Macnaha suugaan Friday afka Ingiriisiga waa shirka.
Sida kor ku xusan, Minbarka waa maalin muhiim ah in Islam sababta oo ah dhacdooyinka taariikhiga ah iyo Salaadda gaar ah. Salaadan gaar ah waxaa loo yaqaan salaadda Jummah.
Salaadan ayaa loo soo bandhigay Friday kasta halkii salaadda 2aad (casirka salaadda) gelinka dambe ee masaajidka. The wakhtiga salaada jimcaha waxay noqon kartaa kala duwan ee masaajidka kasta oo ku xiran tahay inta kale ee jadwalka of masaajidda laakiin waxa ay inta badan ka dhacay wakhtigii salaadda Zuhur. Nabiga (NNKH) ayaa sheegay in:
"Maalintii ugu fiican ee Ilaah hortiisa waa Friday, maalintii shirka "
Quran ayaa sidoo kale ku dhiiri Muslimiinta in ay booqdaan masaajidda Salaadda Jimcaha:
"Kuwa xaqa rumeeyow! Marka call si ay salaadda waa on Friday naadiyey dad kuuguma soo dhaqso oo Xusidda Eebe iyo ka tago gees u ganacsi. Taasi waa idiin khayr roon haddaad tihiin kuwo wax og." (Quran 62:9)
salaada jimcaha sidoo kale waa u gaar ah Muslimiinta, maxaa yeelay duwan Salaadda kale ee maalintii, ma jiro oo keliya Azaan (Wac Salaadda) iyo Salah laakiin sidoo kale Imaams ee masaajidda samatabbixin Khutbah gaar ah (hadalka) ka hor salaadda Jummah ah
Salaadda Jimcaha ee Islam karin in la buuxiyaa aan Hadalkan ayaa u dhiibay in af Carabi keliya.
In qolooyinka tiro badan oo ka mid ah dalalka Muslim, ku Imaam Masjid ayaa sidoo kale ka samatabbixiyaa hadalka ah in luqaddooda la xidhiidha Islaamka.
Minbarka Mubarak gif
Waa maxay minbarka
Ujeedada hadalka waa in ay ogaadaan Muslimiinta waxbaridda weyn Nabiga (NNKH) iyo xusuusin uu ku allabaryi jiray ee Islaamka ah.
dhaqan Tani ma aha mid caadi ah in dhammaan dalalka Muslim laakiin wadamada sida Pakistan, Hindiya, Bangladesh, Masar iyo Saudi Arabia samayn this raacaan.
Friday waxaa loo arkaa maalin quduus ah dadka muslimiinta ah, sababta oo ah muhiimadda iyo farriimaha oo waxaa la ii gacangeliyey by Nabiga ah (NNKH) waayo, maanta inaad u sheegto sida ay muhiim.
Maanta ayaa la kaliya lagu magacaabo barakaysan, laakiin sidoo kale sida maalinta Ciida (maalinta dabaal) by Nabiga ah (NNKH). Laakiin taasi ma aha oo kaliya sababaha ugu yeeray Friday sida quduuska.
Waxaa jira dhacdooyin badan oo muhiim ah ka dhacay maanta ay sabab u tahay taas oo Muslimiinta ugu yeedhaan maalin Jummah (Jumu'ah)sida maalin quduus ah. dhacdooyinka waxaa ka mid ah dhacdooyinka sida:
Eebaa u abuuray Adam on Friday wuxuu u diray inuu Dhulka. Sida ay culimada Islaamka, sidoo kale waa maalintii uu dhintay
Sida laga soo xigtay cilmiga Islamic, ayaa saacad dhan baryadii qofka la aqbalay by Eebe
Minbarka ayaa yeedhay sidii maalintii sayidkii ee toddobaadka hab la mid ah sida Ramadan ayaa u yeedhay sayidkiisa oo dhan bilood
Culimada Islaamka sheegan in saacad kasta ee maanta, kun oo naftiinna la sii daayay ka naar ama
Sida laga soo xigtay Ibn Majah, maantadan la joogo ayaa yeedhay sidii hooyadiis maalmood halkaas oo Tirmidi ayaa sheegay in dadka ku dhintay maanta waa la badbaadin doonaa ka cadaabka qabriga
Maxaad ula jeeddaan by minbarka Mubarak?
Shaqada Mubarak waa ama Mabrouk waa dunida afka Carabi taas oo macnaheedu yahay waa barakeeyey ama hambalyo. In dunida Muslimka, eraygan ayaa loo isticmaalaa in lagu hambalyeeyo dhacdo ama maalin kale ee Muslimiinta.
Minbarka Mubarak Hadees
Juma Mubarak in ingiriisiga
minbarka Mubarak taasoo la micno ah in soomaali
minbarka Mubarak in Carabi
Sidaas, marka aad maqasheen in Muslim ah waxaa leh Minbarka Mubarak ama minbarka Marouk si raacsane kale, taas macnaheedu waa in uu Salaan barakooyinka maanta gaarka ah midba midka kale. Iyadoo labada Mubarak iyo Mabrouk waa erayadii Carabi laakiin dalal Muslim non-Carabi,
Muslimiinta door bidaan in ay isticmaalaan erayga this salaanno barakooyinka Friday midba midka kale halkii isticmaalaya erayga luqadaha maxaliga ah ama qaranka iyaga u gaar ah sida Urdu, Hindi, English, iyo Turkish iwm.
Dadka qaarkood ayaa sidoo kale door bidaan in ay isticmaalaan erayo kale ee la xiriira in ay soo salaamayaan barakooyinka Friday. Ereyadan waxaa ka mid faraxsan Jummah, faraxsanahay minbarka, ku faraxsan minbarka Mubarak 2018, Juma Kareem iyo Jimcaha Mubarak iwm.
Ma jiro Dua kasta Mubarak jimcaha ah ayaa laga helay Quraanka iyo Hadees. Taas macnaheedu waa in aadan sameyn doonto inaad ku xadido si Dua gaar ah oo kaliya, laakiin aad ku tukatid wax ku haboon baahidaada.
Haddii aad Google "Minbarka Mubarak laba" waxaad heli doontaa kun oo kala duwan Dua minbarka Mubarak oo ku qoran luqado kala duwan.
Waxaad tegi kartaa wax kasta oo iyaga ka mid ah oo aad ugu halkii jeclaan of naftaada yareysey la mid gaar ah minbarka Mubarak laba, ah minbarka Mubarak laba ayaa la isticmaalay by Muslimiinta in ay soo salaamayaan dhex dhufto ee online sida Whatsapp, Facebook, iyo Twitter oo xataa iyada oo SMS iwm .
Waxaad samayn kartaa Dua minbarka Mubarak sinaba gaar ah oo ay ku jiraan ka dib markii Salaadda rasmi ah Friday 2018 in masjidka. Qaar ka mid ah masaajidda ee adduunka si gaar ah u qabanqaabiyaan ee minbarka laba taas oo ay u duceeyaan aadanaha oo dhan iyo gaar ahaan dadka muslimiinta ah.
minbarka Mubarak 2018: muhiimadda, laba, Barako, ः ades, iyo Quran https://jummamubarak.info
Hesho macluumaad ku saabsan minbarka Mubarak ay ka mid yihiin muhiimadda ay leedahay Jummah, laba, Hdes, iyo aayaadkiisa ee Quran
Minbarka Mubarak Status 2018 In Urdu-English
minbarka Mubarak 2018 English-Urdu Hadees Collection With…